“मेरो पहिलो गित यूके मा लेखियो , नेपालमा बन्यो र यूएइमा खिचियो” : डा.पोषेन्द्र सत्याल ‘प्रभात’ (गीतकार) | kollywood Update
“मेरो पहिलो गित यूके मा लेखियो , नेपालमा बन्यो र यूएइमा खिचियो” : डा.पोषेन्द्र सत्याल ‘प्रभात’ (गीतकार)
यूकेमा रहेर पनि गित लेखनलाइ निरन्तरता दिइरहनु भएका गितकार डा.पोषेन्द्र सत्याल को पहिलो गित “ए मोरि कहाँ कि हौ……” रेकर्ड भइ तयार भइ सकेको छ । यस गितको भिडियो पनि तयार हुदैछ । आफ्नो पहिलो गित बजारमा आउनै लाग्दा गितकार डा. सत्यालमा एक प्रकारको नौलो उत्साह छाएको छ ।
प्रस्तुत छ गितकार डा.पोषेन्द्र सत्याल संंग कलिउड अपडेट ले गरेको कुराकानि ।
१. तपाईं कसरी गीत-लेखन क्षेत्रमा लाग्नु भो ?
सानैदेखि साहित्यमा, बिशेषगरी कविता लेखनमा रुचि भएपनि गीत-लेखन क्षेत्रमा यो मेरो पहिलो प्रयास हो । म स्कुल पढ्दा बिभिन्न कविता प्रतियोगिताहरुमा भाग लिन जान्थे । त्यसपछि कहिलेकाहि केही कविताहरु फुटकर रुपमा बिभिन्न साहित्यिक पत्रिकाहरुमा प्रकाशित हुँदै आएका पनि छन् । पढाई र कामको शिलशिलामा बिदेशमै रहदा पनि नेपाली साहित्यप्रतिको मेरो रुचि कायमै छ । बिशेषगरी अन्तरराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बेलायत च्याप्टरको संस्थापक अध्यक्षको रुपमा केही बर्ष सक्रिह रहें पनि । तर फेरि पछिल्लो समय कामको ब्यस्तताले गर्दा साहित्य लेखनमा निरन्तरता दिन सकि रहेको थिइन । यसै बखत मेरो सम्पर्क सम्योगबश बेलायतमा बस्नुहुने संगीतकार तेन्हाङ राईँ र गीत निर्देशक दयाराम घिमिरे सँग भयो र हामी मिलेर नयाँ नेपाली गीत सिर्जना गर्ने सल्लाह भयो । यो नयाँ गीत त्यही सम्योगले जन्मिएको रचना हो । अर्को संयोग झन रमाइलो छ । यो गित यूके मा बसेर लेखियो , नेपालमा बन्यो अनि भिडियो यू ए इ मा खिचिएको छ ।
२. तपाईंको नयाँ गीतमा कस्तो प्रतिकृया आइरहेको छ ?
मेरो नयाँ गीत ‘ए मोरी कहाँ कि हौ ?’ दुई प्रेमीहरुको पहिलो भेट हुँदाको झझल्को र भावनालाई समेटेर लेखिएको रोमान्टिक गीत हो । यसलाई गायक रामचन्द्र काफ्लेले नेपाली झ्याउरेपन को फ्युजन दिएर मौलिक हिसाबले गाउँनु भएको छ, अझ नाचु-नाचु लाग्ने गरी । भर्खरै मात्र रेकर्ड भएको यो गीतको म्युजिक-भिडियोको सम्पादन सकिए पछि चाडै नै रिलिज गर्ने तर्खरमा छौ । अहिले जति साथी-भाइ र आफन्तहरुले यो गीत सुन्नु भयो, सबैले मन पराउनु भएको छ । गायकले पनि ‘आफुलाई सुहाउदो र गाऊदा एकदमै आनन्द आउने’ गीत भन्ने प्रतिकृया दिनु भएको छ । मलाई आशा छ कि गीतका पारखी र आम श्रोता र दर्शकहरुले पनि यो गीत लाई मन पराउनु हुनेछ ।
३. तपाईंको भावी योजना के छ, गीत-स‌गितको क्षेत्रमा ?
म अहिले अर्को एउटा रोमान्टिक गीत कोर्दैछु । यो पनि संगीतकार तेन्हाङ राईँ र गीत निर्देशक दयाराम घिमिरेसँगको सहकार्य हुनेछ । हामी गीत अनुसारको स्वर मिल्ने गायकको पनि खोजी गर्दैछौ । आउँदा दिनहरुमा पनि हाम्रो सहकार्य जारी रहनेछ । भविश्यमा नयाँ खाले, मौलिक नेपाली गीत-सङीत सिर्जना गर्ने योजना छ । देश-प्रेमले भरिएका र परिवर्तनबाहक गीत पनि लेख्ने बिचार छ ।
४. तपाईं अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ?
म हाल बेलायतको इष्ट एङ्लिया युनिभर्सिटीको अन्तरराष्ट्रिय बिकास बिभागमा कार्यरत छु । यसै क्रममा अनुसन्धानका लागि नेपाल लगायत बिभिन्न मुलुकको अध्ययन-भ्रमण गर्ने मौका मिल्ने गर्छ । मेरो गीत-लेखन पनि प्रायँ त्यही यात्रा र फुर्सद्को समयमा हुने गर्छ ।
५. तपाईंको गीत रिलिज हुनै लाग्दा, तपाईंलाई के भन्नु छ ? कस्तो लागिरहेछ ?
म्युजिक-भिडियो बन्ने बित्तिकै गीत रिलिज गर्न र तमाम श्रोता र दर्शक सामु पुर्याउन म एकदमै आतुर छु । मलाई आशा छ कि सबैले यो गीत मन पराइ दिनुहुनेछ र मलाई थप हौसला दिनुहुनेछ । अन्त्यमा म सम्पूर्ण श्रोता र दर्शकहरुलाई अग्रिम धन्यवाद दिन चाहन्छु ।